दशैंको मुखमा कुन-कुन सवारीको मूल्य बढ्दैछ ?
काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् गरिएको अन्तस्शुल्क र सडक दस्तुर वृद्धिले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको मूल्य बढ्ने भएको छ।शैंको बेला मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य बढ्ने भएको हो।
शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अन्तस्शुल्क र सडक दस्तुरमा वृद्धि गरिएको छ। तयारी अवस्थामा आयात हुने मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य बढ्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्। बिक्रेताले गत साउनमा मोटसाइकलरस्कुटरको मूल्य बढाइसकेका बेला नयाँ अन्तस्शुल्क र सडक दस्तुर वृद्धिले पुनस् मूल्य बढ्ने भएको उनीहरुको भनाइ छ।
कुन-कुन सवारीको मूल्य बढ्छ ?
गत जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा ५० माथिदेखि १५५ सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत थियो। प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले ५० माथिदेखि १२५ सीसीसम्मलाई ४० प्रतिशत अन्तशुल्क कायम राखेको छ। यी मोटरसाइकलरस्कुटरमा १५ हजार रुपैयाँ सडक दस्तुर पनि तोकिएको छ।
यस्तै १२५ भन्दामाथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको नयाँ ‘स्ल्याब’ बनाएर अहिलेको बजेटमा अन्तस्शुल्क ४० प्रतिशत तोकेको छ। प्रतिस्थापन विधेयकले २०१ देखि २५० सीसीसम्मका दुइपाग्रे सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क तोकेको छ। जबकी यसअघिको बजेटमा १५५ देखि २५० सीसीसम्मका दुइपांग्रेको अन्तशुल्क ५० प्रतिशत मात्र थियो।
अन्तस्शुल्क र सडक दस्तुरमा भएको बृद्धिको सोझो असर नेपालमा सबैभन्दा धेरै विक्री १२५ देखि २५० सीसीसम्मका दुईपाङ्ग्रे सवारीको मूल्यमा पर्नेछ। मुख्यतः हिरो, यामाहा, होण्डा, सुजुकी लगायतका कम्पनीका लोकप्रिय सेगमेन्टका मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य एकैपटक १७ हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने देखिएको एक व्यवसायीले जानकारी दिए।
२५० भन्दा माथि ५०० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारी साधनको अन्तस्शुल्क ६० प्रतिशत कायमै राख्दा ५०० सीसीभन्दा माथिमा १०० प्रतिशत बनाएको छ।यसअघि ५०० देखि ८०० सीसीसम्म ८० प्रतिशत र ८०० सीसीभन्दा माथि शतप्रतिशत अन्तशुल्क लाग्थ्यो।
दशैंका लागि यी ४३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन
सुनको भाउ ह्वात्तै बढ्यो : तोलाको कति पुग्यो ?
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य : तोलाको कति पुग्यो ?